ပိုက်ဆံ မပေးပါနဲ့… ဝှီးချဲရရင် အဖွား တောင်းစားပါ့မယ် – Shwe Thadin
အဖွား အသက် (၆၂)နှစ်…မိသားစု မရှိပါ။ လေးဘက်နာ(ဂေါက်)ကြောင့် လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘူး။ ရပ်ကွက်ကနေ ကျူးလေး ဆောက်ပေးပြီး ကြည့်ရှူ စောင့်ရှောက်ပေး ထားပါတယ်။ ဖင်လေး တရွတ်တိုက်ပြီ လိုက်တောင်းရပါတယ်…တောင်းတဲ့နေရာအနီးက ဆေးခန်းတခုမှ ကျနော့် ဖုန်းနံပါတ် ပေးလိုက်ပါတယ်။
အဖွားမှ ဖုန်းဆက်လာပါတယ်။ သား ကိုပူတူး လားဟင်…အဖွားက သန်လျင်ကပါ…အဖွားကို ပိုက်ဆံ မလှူပါနဲ့ သားရယ်…အဖွားကို ဝှီးချဲလေးပဲ ပေးပါ…အဖွား ဘာသာ တောင်းစားပါ့မယ် ဟုတ်ကဲ့ အဖွား…ကျနော် စာရင်းလေး မှတ်ထားပေးမယ်နော်…ဒါနဲ့ အဖွားဆီ ရောက်အောင် သွားခဲ့ပါတယ် …..တကယ့်ကို စိတ်မကောင်းစရာပါ….
ကျနော့်ရောက်တော့ အဖွားက ငိုရှာတယ်…သား တကယ် ရောက်လာတာပေါ့နော်…အဖွား အိမ်မက် မက်နေတာ မဟုတ်ပါဘူးနော်…တကယ်ပေါ့ အဖွားရဲ့…သားရောက် ပြီလေနော် မငိုနဲ့တော့…အားမငယ်နဲ့တော့ အဖွား…အဖွား တကယ် ဝှီးချဲလေးရပြီပေါ့နော်…စျေးထဲကလူတွေ လုပ်ပေးတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်လေး ဖြုတ်လို့ရပြီပေါ့နော်…ဟုတ် အဖွား…ဖြုတ်လိုက်လို့ရပါပြီ…
သား ရောက်လာပြီလေနော်…အဖွား တအား ဝမ်းသာလိုက်တာ သားရယ်…ဒါလေး ရှိရင် အဖွား ဖင်တရွတ်တိုက် သွားစရာမလိုတော့ဘူး…အဖွား ဘာသာ တွန်းပြီ သွားလို့ရပြီ…အဖွား ဝှီးချဲလေး ရပြီဆို…အဖွား စားဖို့နှင့်ဆေးဖိုးလေး ထွက်တောင်းလို့ရပြီ…ဟုတ် အဖွား….ရော့ 50,000 Ks နော် အဖွား ကျန်းမာရေးတွက် လိုအပ်တာတွေ ဝယ်နော်…အရမ်း ဝမ်းသာတယ်…
အဖွား အိမ်မက် မက်နေသလိုပဲ…အဖွားဆီ သား တကယ်ရောက်လာတာပဲနော်…တကယ်ပေါ့…ခု အဖွား အိမ်မက်မဟုတ်တော့ဘူး…အိမ်မက်တွေ တကယ်ဖစ်လာပြီအဖွား…အဖွားကို ရိပ်သာသွားမလား မေးတော့…အဖွားက သူကိုယ်တိုင် ဘာမှ မလုပ်နိုင်တော့…အဖွားကြောင့် တခြားလူတွေ ဒုက္ခရောက် နေမှာဆိုးလို့ မသွားတာပါ သားရယ်…
ဒီကလူတွေကတော့ အဖွားကို ဝိုင်းဝန်းကူညီစောင့်ရှောက်ပေးတော့…အဖွား အဆင်ပြေပါတယ် သားရယ်..(ကျနော်နှင့်အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်လှူဒါန်းပေးကြသော (၇)ရက်သားသမီးများအား အဖွားကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ) အော…
အဖွားဆီ ကျနော်တကယ်လာမှန်းသိတော့…အဖွား ပျော်သွားပြီ ငိုတာလေးကြည့်ပြီ…ရင်ထဲ အတော် မကောင်းဘူး…ဆင်းရဲနွမ်းပါး အဖိုးအဖွားများအတွက် အတူအကွ ပူးပေါင်း ကူညီလှူဒါန်းလိုပါက ကိုပူတူးနှင့်ဘော်ဒါများ ဖုန်း 09-5408437 သို့ ဆက်သွယ်လှူဒါန်း နိုင်ပါ တယ်နော်…..
အဖြား အသက္ (၆၂)ႏွစ္…မိသားစု မရွိပါ။ ေလးဘက္နာ(ေဂါက္)ေၾကာင့္ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။
ရပ္ကြက္ကေန က်ဴးေလး ေဆာက္ေပးၿပီး ၾကည့္ရႉေစာင့္ေရွာက္ေပးထားပါတယ္။ ဖင္ေလး တ႐ြတ္တိုက္ၿပီ လိုက္ေတာင္းရပါတယ္…ေတာင္းတဲ့ေနရာအနီးက ေဆးခန္းတခုမွ က်ေနာ့္ ဖုန္းနံပါတ္ ေပးလိုက္ပါတယ္။
အဖြားမွ ဖုန္းဆက္လာပါတယ္။ သား ကိုပူတူး လားဟင္…အဖြားက သန္လ်င္ကပါ…အဖြားကို ပိုက္ဆံ မလႉပါနဲ႔ သားရယ္…အဖြားကို ဝွီးခ်ဲေလးပဲ ေပးပါ…အဖြား ဘာသာ ေတာင္းစားပါ့မယ္ ဟုတ္ကဲ့ အဖြား…က်ေနာ္ စာရင္းေလး မွတ္ထားေပးမယ္ေနာ္…ဒါနဲ႔ အဖြားဆီ ေရာက္ေအာင္ သြားခဲ့ပါတယ္ …..တကယ့္ကို စိတ္မေကာင္းစရာပါ….
က်ေနာ့္ေရာက္ေတာ့ အဖြားက ငိုရွာတယ္…သား တကယ္ ေရာက္လာတာေပါ့ေနာ္…အဖြား အိမ္မက္ မက္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူးေနာ္…တကယ္ေပါ့ အဖြားရဲ႕…သားေရာက္ၿပီေလေနာ္ မငိုနဲ႔ေတာ့…အားမငယ္နဲ႔ေတာ့ အဖြား…အဖြား တကယ္ ဝွီးခ်ဲေလးရၿပီေပါ့ေနာ္…ေစ်းထဲကလူေတြ လုပ္ေပးတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ေလး ျဖဳတ္လို႔ရၿပီေပါ့ေနာ္…ဟုတ္ အဖြား…ျဖဳတ္လိုက္လို႔ရပါၿပီ…
သား ေရာက္လာၿပီေလေနာ္…အဖြား တအား ဝမ္းသာလိုက္တာ သားရယ္…ဒါေလး ရွိရင္ အဖြား ဖင္တ႐ြတ္တိုက္ သြားစရာမလိုေတာ့ဘူး…အဖြား ဘာသာ တြန္းၿပီ သြားလို႔ရၿပီ…အဖြား ဝွီးခ်ဲေလး ရၿပီဆို…အဖြား စားဖို႔ႏွင့္ေဆးဖိုးေလး ထြက္ေတာင္းလို႔ရၿပီ…ဟုတ္ အဖြား….ေရာ့ 50,000 Ks ေနာ္ အဖြား က်န္းမာေရးတြက္ လိုအပ္တာေတြ ဝယ္ေနာ္…အရမ္း ဝမ္းသာတယ္…
အဖြား အိမ္မက္ မက္ေနသလိုပဲ…အဖြားဆီ သား တကယ္ေရာက္လာတာပဲေနာ္…တကယ္ေပါ့…ခု အဖြား အိမ္မက္မဟုတ္ေတာ့ဘူး…အိမ္မက္ေတြ တကယ္ဖစ္လာၿပီအဖြား…အဖြားကို ရိပ္သာသြားမလား ေမးေတာ့…အဖြားက သူကိုယ္တိုင္ ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့…အဖြားေၾကာင့္ တျခားလူေတြ ဒုကၡေရာက္ ေနမွာဆိုးလို႔ မသြားတာပါ သားရယ္…
ဒီကလူေတြကေတာ့ အဖြားကို ဝိုင္းဝန္းကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးေတာ့…အဖြား အဆင္ေျပပါတယ္ သားရယ္..(က်ေနာ္ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္လႉဒါန္းေပးၾကေသာ (၇)ရက္သားသမီးမ်ားအား အဖြားကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်) ေအာ…
အဖြားဆီ က်ေနာ္တကယ္လာမွန္းသိေတာ့…အဖြား ေပ်ာ္သြားၿပီ ငိုတာေလးၾကည့္ၿပီ…ရင္ထဲ အေတာ္ မေကာင္းဘူး…ဆင္းရဲႏြမ္းပါး အဖိုးအဖြားမ်ားအတြက္ အတူအကြ ပူးေပါင္း ကူညီလႉဒါန္းလိုပါက ကိုပူတူးႏွင့္ေဘာ္ဒါမ်ား ဖုန္း 09-5408437 သို႔ ဆက္သြယ္လႉဒါန္း ႏိုင္ပါ တယ္ေနာ္…..